Deal: Tinye Otu Express Checkout Ahụmahụ Iji Dịkwuo Conversion udu na mbo mbuli Ahịa | Martech Zone
Deal: Tinye Ahụmahụ Ọpụpụ Express Iji Nwee Rba Ọnụego Ntugharị ma Nye Aka Ahịa
Fraịde, Jenụwarị 8, 2021 Fraịde, Jenụwarị 8, 2021 Douglas Karr
Onye ọ bụla nke na - ebuli saịtị e-commerce ghọtara na ọ dị mfe na ọ dịịrị mmadụ mfe ịgbanwe, ọ dị elu ọnụego ntụgharị na ahịa ndị ọzọ saịtị gị ga - enweta. Dika ndi ahia ritere na desktọọpụ gaa na mkpanaka, nke a na-adịwanye egwu maka usoro ecommerce gaa nke ọma… ngwa ngwa, dị mfe ma dịkwa mfe iji ahụmịhe ọpụpụ a nwapụtaworo na dịkwuo akakabarede udu.
Ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma na-enye mgbanwe na-enye ahụmịhe ọpụpụ na-enweghị isi. Pịa site na PDF maka nyocha zuru ezu.
Deal awade ulo oru na a n'otu n'elu ikpo okwu na n'ụzọ zuru ezu ike ụlọ nke ngwaahịa maka awara awara awara awara:
Gwa ngwa ndenye ọpụpụ - fanye Deal'Wide wijetị ndenye ọpụpụ na otu akara nke koodu wee bido iziga ndị ahịa na peeji ndenye ọpụpụ. Enwere ike ịkesa wijetị ndị a ma tinye ya na saịtị ndị ọzọ maka ndị mmekọ na ndị na-eme ihe ike.
Njikọ Ọpụpụ ozugbo - Ziga ndị ahịa ozugbo maka ndenye ọpụpụ. Deal achọghị paswọọdụ ma ọ bụ banye. Ndabere ọpụpụ n'ịntanetị nwere mpaghara 12.8 ma were nkeji 2:25. Deal nwere ike belata ya na otu pịa.
Ọpụpụ QR Code - Enweghị mkpa ibudata ngwa, Deal'S QR code ịkwụ ụgwọ na-enyere onye ọrụ ekwentị ọ bụla aka ịde foto ma gaa ozugbo na ndenye ọpụpụ.
Mobile Apps - Deal na-enye ndị debanyere aha ya na ngwa iOS na ngwa gam akporo iji bulie ahụmịhe ndị ahịa ha. Ozugbo ị kwalite, anyị na-ebipụta ngwa ọcha akpọrọ ahaziri maka ụlọ ọrụ gị. Anyị na-elekọta ilekọta ngwa ngwa ebipụta maka gị.
Enweghị njikọta ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ achọrọ. Na-eme awara awara ndenye ọpụpụ na-arụ ọrụ na nyiwe e-commerce, nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta, saịtị static, blọọgụ na ọbụlagodi ụlọ ahịa gị.
Ọ bụrụ na ị nwetara Shopify, BigCommerce, WooCommerce, PrestaShop, Magento, Unbounce, isii, Squarespace, Opencart, Umso, Ideasoft ma ọ bụ ndị ọzọ… ị nwere ike itinye ihe ndenye ọpụpụ gị awara awara taa!
Bido ugbu a n'efu na azụmahịa
Ngosi: Abụ m mmekọ maka Deal na m na-eji njikọ njikọta na edemede a.
Tags: njikọ ndenye ọpụpụndenye ọpụpụ wijetịndibiatecommerce ndenye ọpụpụecommerce mobile ndenye ọpụpụkwupụta ndenye ọpụpụkwupụta wijetị ndenye ọpụpụndenye ọpụpụ ngwa ngwaIdeasoftdịkwuo akakabarede uduqrNdenye ego QRenweghị nkebi ndenye ọpụpụ
Nkwupụta ihu ọha: Chọta ndị na-eme ihe ike, wuo mkpọsa, na tụọ nsonaazụ
Etu esi ewepu nseta ihuenyo na webụsaịtị doro anya na iji Google Chrome